Sidee Loo Ogaadaa In Qof Ku Xayiray WhatsApp 2021
Sideed Ku Ogaaneysaa In Qof Uu kaa Xayiray WhatsApp
Haddii aad qof u dirayso farriimo WhatsApp ah, laakiin aanad helin wax jawaab ah, waxa laga yaabaa inaad isweydiiso haddii lagu xannibay. Hagaag, WhatsApp si toos ah uma soo baxo oo ma dhaho, laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu ogaado.
Ka eeg Faahfaahinta Xiriirka Wadahadalka
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad kufurato wadahadal ku saabsan codsiga WhatsApp ee iPhone ama Android ka dibna fiiri faahfaahinta xiriirka xaga sare. Haddii aadan arki karin sawirkooda muuqaal iyo kii ugu dambeeyay ee la arkay, waxaa macquul ah inay ku xannibeen. Avatar la’aan iyo farriintii ugu dambeysay ee la arkay maahan dammaanad inay ku xannibmeen. Qofka aad la xiriirto wuxuu curyaamin karaa waxqabadkoodii ‘Last Seen’.
Isku day Qoraal ama Wicitaan
Markaad fariin u dirto cida kaa xanibtay, rasiidka dirista ayaa kaliya muujinaysa hal calaamado. Farriimahaagu dhab ahaan ma gaadhayaan WhatsApp-ka qofka lagala xiriirayo. Haddii aad farriin u dirtid ka hor intaanay ku xannibin, waxaad arki lahayd laba calaamadood oo beddel ah.Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad soo wacdo. Haddii wicitaankaagu uusan dhex marin, waxay ka dhigan tahay in lagaa xanibay. WhatsApp dhab ahaan ayaa kuu yeeri doonta wicitaanka adiga, waxaadna maqleysaa iyada oo la yeerayo, laakiin qofna ma qaban doono dhinaca kale.
Isku day Ku daristooda Koox
Tallaabadani waxay ku siin doontaa calaamadaha ugu hubaal ah. Isku day inaad ka sameysato koox cusub WhatsApp kana mid ah kooxda ka mid noqoshada. Haddii WhatsApp ay kuu sheegto in barnaamijku uusan qofka ku dari karin kooxda, waxay ka dhigan tahay inay kaa xannibeen.